विदेशी बिनिमयदर : बढ्यो युके पाउड बाहेक अन्य देशको मूल्य – NepalDailyPost
नेपाल डेली पोस्ट २०७६, २५ श्रावण शनिबार ११:०४
विदेशी बिनिमयदर : बढ्यो युके पाउड बाहेक अन्य देशको मूल्य
एजेन्सी, काठमाडौं। आज नेपाली बजारमा युके पाउण्ड बाहेक अन्य सबै देशको मुल्य बढेको छ । आज एक अमेरिकी डलरको खरिददर ११२ रुपैयाँ ९९ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रदर ११३ रुपैयाँ १५९ पैसा तोकिएको छ । आज एक कुवेती दिनारको खरिददर १७१ रुपैयाँ ५५ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर १७३ रुपैयाँ ५२ पैसा रहेको छ ।
त्यस्तै आज एक साउदी रियालको खरिददर ३० रुपैयाँ १२ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ २८ पैसा रहेको छ। त्यसैगरी आज एक मलेसियन रिँगिटको खरिददर २७ रुपैयाँ रहेको छ भने बिक्रिदर २७ रुपैयाँ १४ पैसा रहेको छ। आज एक युके पाउण्ड स्ट्रलिङको खरिददर १३६ रुपैयाँ ३० पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर १३७ रुपैयाँ २ पैसा रहेको छ।
त्यस्तै आज एक युएई दिरामको खरिददर ३० रुपैयाँ ७६ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ९३ पैसा रहेको छ। त्यसैगरी आज एक बहराईन दिनारको खरिददर २९९ रुपैयाँ ७० पैसा रहेको छ भने ३०१ रुपैयाँ २९ पैसा रहेको छ। एक कतारी रियालको खरिददर ३१ रुपैयाँ ३ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ २० पैसा रहेको छ।
विदेशी विनिमयदर : कुन देशको मुद्राको भाउ कति ?
विदेशी विनिमयदर : यस्तो छ आजको विदेशी मुद्रा
विदेशी बिनिमयदर : बढ्यो मुद्राको भाउ, कुन देशको कति ?
आजको विदेशी विनिमयदर यस्तो छ
PREVIOUS Previous post: पब्लिक स्पिकरको विजेता पछि, पहिलो पटक रमेस प्रसाईँ को धमकेदार प्रस्तुती
NEXT Next post: विमलको गोलले निलान्धो स्पोर्ट्स क्लबमाथि टिसीको सानदार जित
भोलि, कसैले प्रधानमन्त्री ओली, प्रचण्ड वा देउवाका कारण आत्महत्या गरेको हूँ भनेर पासो लगायो भने उहाँहरु जेल जानुपर्छ कि पर्दैन ? 24,153 views
शालिकराम पुडासैनीको पोष्टमार्टम रिपोर्ट आइपुग्यो , के देखियो पोष्टमार्टम रिपोर्टमा ? 3,312 views